Madaxweyne Siilaanyo Oo Go,aan Adag Kasoo Saaray Muranka Iyo Khilaafka Deegaanka Dhowaan Dagaalku Ka Dhacay Ee Kalshaale Iyo Maygaagle | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Go,aan Adag Kasoo Saaray Muranka Iyo Khilaafka Deegaanka Dhowaan Dagaalku Ka Dhacay Ee Kalshaale Iyo Maygaagle
Hargeysa(ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo), ayaa go’aan shan qodob ka kooban ka soo saaray colaadii dhowaan ka oloosantay deegaanka Kalshaale ee u dhaxaysay dhinacyada deegaankaa, taas oo ka dhalatay Berkedo iyo lahaanshiiyaha Kalshaale,
wuxuuna Madaxweyne Siilaanyo ku xusay qodobada uu soo saaray in deegaankaasi hada wixii ka danbeeya inuu fadhiisin u noqonayo Ciidamada Qanka Somaliland.
Sidaana waxa lagu sheegay qoraal saxaafadeed maanta kasoo baxay xafiisa madaxweynaha oo uu ku saxeexanyahay Chief of Cabinet-ka Madaxtooyada Xirsi Cali X. Xasan, kaas oo lagu sheegay inuu madaxweynuhu soo saaray qodobo lagu soo afjaray dhibaatadii ka taagnayd Kalshaale. Sidoo kale wuxuu Madaxweynuhu qoraalkiisa baaq ugu diray labada beelood inay ciidammadooda ka qaadaan deegaanka murranku ka taagnaa..
Qoraalka kasoo baxay Madaxtooyadda ayaa u dhignaa sidan;- “Madaxweynaha JSL Mudane: Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu maanta Go’aanka ka soo saaray Arrintii Kalshaale ka dhacday, waxaanu Madaxweynuhu Go,aankaa ku yidhi.
Arrinta Kalshaale ka dhacday waa arrin labo beelood oo Somaliland ah u dhaxaysay, Dilalka ka dhacayna aad iyo aad ayaan uga xumahay dadkii ku dhintayna illaahay naxariistii janno ayaan uga baryayaa, Ehlladoodii iyo dhamaan Qaranka Somaliland waan uga tacsiyadaynayaa.
Markii arrintani dhacday Dawlad-ahaan waxaanu qaadnay talaabadii ku haboonayd, isla markiiba waxaanu kala dhexdhignay cutubyo ka tirsan ciidanka Qaranka JSL si ay u kala caabiyaan Malayshiyaadka labada beelood nabadana u sugaan, isla markiiba waxaanu u diray guddi dhexdhexaadineed oo ka kooban Xukuumadda, Golayaasha, Xisbiyada, Madaxdhaqmeedyo, iyo Culima-awdiin.
Anigoo tixraacaya xukunkii ay soo saareen guddigii dhexdhexaadka ahaa ee ka garsooray arrintan.
Anigoo maanka ku haya ahmiyaddda nabadgelyadu Qarankan u leedahay iyo jidkii dheeraa ee loosoo maray.
Anigoo fulinaya Masuuliyadayda iyo waajibaadka Dastuuriga ah ee isaaran waxaan go’aamiyay: –
1. In Goobaha shaqaaqadu ka dhacday iyo deegaanka lagu muransanyahay in maanta laga bilaabo ay ahaato fadhiisin ciidanka Qaranku leeyahay oo ka caagan dhisme iyo qodaal balse ay labada beelood wada daaqikaraan, wixii hanti ka gashay labada dhinacna dawlada ayaa u celinaysa cidii lahayd.
2. Dhimashadii, Dhaawicii iyo Hantidii ku luntay shaqaaqadii dhexmartay labada beelood waxaa dawladu u raacayaa una fulinayaa sidii ay ku xukuntay guddigii garsoorka ahayd.
3. Waxaan labada dhinacba farayaa inay kala baxaan ciidamadooda Kalshaale, Maygaagle iyo Hagoogane iyadoo aan laga ogolaan doonin ciidamo beeleed abaabulan, waxaa keliya oo ka hawlgelikara ciidamada Qaranka JSL.
5. Waxaan mar labaad baaq iyo Gogol nabadeed usoo jeedinayaa beelaha Buuhoodle, Sool iyo Sanaag Bari.
Waxaan mahad ballaadhan usoo jeedinayaa: –
b) Guddigii dhexdhexaadka ahaa oo si hufnaan iyo cadaalad leh uga garqaaday mashaqadii dhexmartay labada beelood,